Kiraro, kapa, tenisy - Tsarabika
> Ankizy>Kiraro, kapa, tenisy
Tenisy ho an'ny ankizy, azo hoentina mandeha an-tongotra mandritra ny ora maro, tsy mavesatra be, fa tena maivamaivana tsara, ary malefaka aok'izany. Tsy hatahorana ho mora tapaka ihany koa ny faladihany. Miloko "fushia" izy ity. P 23, 24
Tenisy miloko "beige" natao ho an'ny ankizy. Mitovy amin'ireny "converse" ireny izy ity, ary tena malefaka tokoa. Tsy hatahorana ho mora tapaka ny faladihany fa azo atokisana tsara. P 29, 24, 25
Kiraro mihaja ho an'ireo zaza na ankizy madinika. Miloko manga izy ity, ary mahafinaritra kely mihitsy ny mijery ny zaza rehefa manao azy. Tsotra, malefaka ary mora ampidirina. Tsy manahirana, fa tena mety tsara ho an'ny zaza.
Tenisy ho an'ny ankizy kely, tsotsotra tsy dia be haingony, anefa tena tsara, sy meva. Vita avy amin'ny lamba "Jeans" izy ity, malefadefaka tsara arka izany. Ny faladihany ihany koa dia tsy mora tapaka fa maharitra tsara. P 29
tenisy marika "charly" natao ho an'ny ankizy. Maivamaivana tsara tsy mandreraka tongotra. Azo hoentina mandritra ny tontolo andro. Vita avy amin'ny lamba izy ity, ary miloko "fushia" ny vatany ary manga kosa ny faladiany, izay malefaka tsy mora tapaka.
Tenisy fitondra manao fanatanjahantena, na hoentina rehefa mivoka ny trano, natao ho an'ny ankizy. Manana faladia mamikitra tsara tsy mampianjera rehefa mandeha amin'ny lalana malama, mora hanaovana satria tsy mila mamatotra "lacet" intsony, fa efa misy "lacet" fingotra efa voazaitra eo aminy
Tenisy fitondra manao fanatanjahantena (hazakazaka na tenisy basikety) ho an'ny ankizy. Mora hanaovana, ary mafy sady tsara, tsy manelingenila, fa mahazo aina tsara ny tongotra manao azy
Kiraro ho an'ny zazavavy kely, Habehany:22Mahafinaritra sy mahafatifaty kely
Tenisy BUBBLEGUMMER. Mafy sady tsara.Ho an'ny ankizy P32 Tonga: faran'ny janoary 2014
Kiraro supra, lamaody vaovao 2014.p33, ho an'ny ankizy